निपाह भाइरसको उच्च जोखिममा नेपाल, कसरी बच्ने ? « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
निपाह भाइरसको उच्च जोखिममा नेपाल, कसरी बच्ने ?
काठमाडौं । भारतमा निपाह भाइरसका बिरामी देखिन थालेपछि नेपालको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सजग रहन आग्रह गरेको छ । एनआईभी भनिने निपाह भाइरसको सङ्क्रमण भरतमा देखिएकाले नेपालमा पनि फैलिने सम्भावना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा। समीरकुमार अधिकारी बताउँछन् । रोग नियन्त्रण महाशाखाले रोगको यकिन निदान नहुँदै वा तीव्र भाइरस सङ्क्रमणको अवस्था बिग्रँदै गएका र मृत्यु भएका बिरामीहरूको समयमै अनुसन्धान गरी न्यूनीकरण गर्न र तत्काल रिपोर्टिङ गर्न देशभरका अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल–भारत खुला सीमा भएकाले यो भाइरस नेपालमा पनि फैलन सक्ने जोखिम बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ । २१ मे २०१८ मा दक्षिण भारतीय राज्य केरलामा निपाह भाइरसका कारण १२ जनाको मृत्यु भएको थियो । भारतकै केरला र उत्तर प्रदेशमा निपाह भाइरस सङ्क्रमितहरूको उपचारमा संलग्न नर्सको पनि मृत्यु भएको थियो । भारतमा निपाह भाइरसका बिरामी देखिन थोलेपछि नेपाली पनि सचेत हुनुपर्ने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा। अधिकारी बताउँछन् ।
सरुवा रोग भारतमा देखियो भने नेपालमा पनि देखिने सम्भावना बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोरोना सङ्क्रमण भारतमा बढ्यो भने नेपालमा पनि बढ्छ, सङ्क्रमण त्यहाँ घट्यो भने यहाँ पनि घट्छ । त्यसैले सजग हुनुपर्छ ।’ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निपाह भाइरसलाई ठूलो महामारीका रूप लिन सक्ने दस घातक रोगमध्ये एउटा भनेको छ । भारतका विभिन्न ठाउँमा नेपाली कामदार कार्यरत छन् । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा भारतका विभिन्न भागबाट स्वदेश भित्रिने नेपाली बढेसँगै निपाह भाइरस पनि सर्ने जोखिम बढ्छ ।
यो कस्तो प्रकारको रोग हो र ?
निपाह भाइरसबाट कसरी जागिने
यसको औषधि छ कि छैन